Aqoon-is-weydaarsi ku saabsan habka wadashaqeynta Guddiga iyo daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka. – GMDQ
Aqoon-is-weydaarsi ku saabsan habka wadashaqeynta Guddiga iyo daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka.
Aqoon-is-weydaarsi ku saabsan habka wadashaqeynta Guddiga iyo daneeyeyaasha Arrimaha doorashooyinka oo maanta taariikhdu ay tahay 9/December/2018 ku qabsoomey xarunta Guddiga ee Magaalada Muqdisho.
Aqoon-is-weydaarsiga waxaa ka qeyb qaatey daneeyeyaasha Arrimaha Doorashooyinka sida Bulshada Rayidka oo ka kala yimid Gobolada dalka Somaliya iyo hay’adaha caalamiga ah.
Aqoon-is-weydaarsiga wuxuu socon doonaa mudo 4 cisho ah, waxaana lagu baran doonaa dhisida xiriirka Guddiga iyo daneeyeyaasha, iyo habka qeexida nooca wada shaqeyn ee dhax mari karta GMDQ iyo daneeyeyaasha.
Aqoon-is-weydaarsiga waxaa furey xubin ka mid ah Guddiga Xuseen Cabdi Aadan, oo sheegay in Guddiga uu u taagan yahay sida ay dadka Soomaaliyeed u gaarsiin laheyd wacyigelinta iyo barida Arrimaha Doorashooyinka, sidoo kale Xuseen wuxuu rajo wanaagsan ka bixiyey in aqoon-is-weydaarsika uu ka soo baxo is faham iyo wadashaqeyn miro dhal ah.
Sidoo kale waxaa furitaanka ka hadley Axmed Isak oo ah lataliyaha Guddiga Doorashooyinka, ahaana Guddoomiyahii hore ee Guddiga doorashooyinka iyo Xaduudaha Dalka Kenya, wuxuuna sheegay Axmed in Doorashada ay door weyn ka qaadan karto madaxbannaanida, ayna xun tahay in wadan caan ku noqdo musuq maasuq. Waxa uu hay’adihii joogay shirka ku dhiirri geliyay in ay la shaqeeyaan Guddiga isla markaana ay la xisaabtamaan.
Waxaa la faafiyey December 10, 2018 December 10, 2018